Mozambika: Mampiahiahy ny Mpiserasera Ny Tena Tanjon’ny Volavolan-“Dalàna Vaovaon’ny Fifanakalozana Elektrônika” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2016 9:57 GMT
Tsangambaton'i Samora Machel manoloana ny monisipaliten'i Maputo. Sarika: Manuel Ribeiro/GV
Nankatoavin'ny Parlemanta mozambikana tamin'ny alakamisy 17 novambra teo ny—LTE— “Lalànan'ny fifanakalozana elektrônika” manameloka ny fandefasana SMS sy ny servisin-dahatahiry heverina ho manivaiva na mety ho mampidi-doza ny fiarovam-panjakana, araka ny tenimita navoakan'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny Frelimo, ao amin'ny Facebook. Tafiditra ao anatin'ity “fifehezana” ity ihany koa ny fifanakalozana ara-bola mba isorohana amin'ny fanaovana hosoka. Nankatoavina noho ny faneken'ny vondrona telo ao amin'ny Antenimieran'ny Repoblika, dia ny Frelimo, ny Renamo ary ny MDM, ity lalàna vaovao ity.
Tao amin'ny fanambarana, voalaza fa natao “hiantohana ny fiarovana ny mpanjifa” ny LTE:
Ny fitsipika voalaza dia mametraka fanasaziana amin'ny fihoaram-pefy an-tserasera ahafahana miantoka ny fiarovana ny mpanjifa sy mampakatra ny fitokisan'ny olom-pirenena amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifanakalozana elektrônika, ny fitaovam-pampitam-baovao ary ny servisy. Sazian'ny lalàna ihany koa ny fanaovana hosoka amin'ny fifanakalozana ara-bola, amin'ny fidirana amin'ny aterineto na fidirana an-tsokosoko ao amin'ny fitoeran-dahatahiry.
Nitontona, noho ny fanatontoloana, tao anatin'ny fotoana itadiavan'ny orinasa [fiarahamonina] – Mozambika indrindra indrindra – hiaina ao anatin'ny “revolisiona informatika” ahafahana manolo ny asan'olombelona ho ataon'ny milina, voamariky ny fiakaran'ny heloka an-tserasera izao fankatoavana ny lalànan'ny fifanakalozana elektrônika izao.
Saingy toa tsy resy lahatra tamin'ny fandresen-dahatra navoakan'ny Frelimo loatra ireo Mozambikana mpiserasera. Tao amin'izany taratasy izany, nasehon'ny mpiserasera aterineto fa manohitra ny LTE ry zareo ary heverin-dry zareo fa mitady “hanidy” ny olom-pirenena izany, tahaka izay nosoratan'i Jacinto Muendane amin'ny fanehoan-keviny manao hoe:
Tadiavin-dry zareo ampanginina amin'ny lalàn-dry zareo ny olona.
Kianin'i Bento Samuel ny LTE tamin'ny fanononana ny raharaha ara-toekarena nanafintohina lehibe indrindra tao amin'ny firenena, ny EMATUM:
Heloka ihany koa ve ny manontany zavatra momba ny Ematum sy ny Nosso Banco?
Sambo miantsona ao amin'ny seranana EMATUM. Saripika: Manuel Ribeiro/GV
Misy kosa etsy ankilan'izany ireo miarahaba ny governemanta:
Tokony hirehareha isika, tokony hitandro ny mahaolona ho fahendrena kokoa isika ary ankasitrahana Andriamanitra namorona antsika sy nitia antsika ho toy ny tsy nanota isika na dia mpanota aza isika.
Ao anatin'izay zotra izay ihany i Macitura Mubai no nanoritra izao fanehoan-kevitra manaraka izao:
Mampalahelo tokoa ny nitranga ary mitranga ao amin'ny media sosialy / e-mailaka! Manaratsy amin'ny lafiny sasany ny firenentsika (ary) amin'ny ankapobeny amin'ireo olona hajaintsika ao amin'ny governemanta.
Ao amin'ny famoahana iray momba ity lohahevitra ity ny gazety @Verdade, maro ireo olona mandray ny “lanjan'ity” lalàna resahina ity. Milaza ny “fikendrena hampanginana ny olona” i Ilídio do Anjos:
Natao fotsiny io hanakanana antsika tsy hiantso ho MPANGALATRA ireo olona mangalatra, miasa ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanovana (PGR) amin'izay fotoana izay, fa raha hiampanga ireo tendan-kanina kosa dia tsy mety amin'izany ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana!
Misimisy ireo mihevitra fa tsy ampy fanajana ny vahoaka Mozambikana ny lalàna:
Ny maha-Mozambikana: tsy miraharaha ny antson'ireo mijaly ary tsy raharahian'ireo tsy mendrika hajaina ireo tokony hajaina.
Mihevitra ihany koa ny Parlemantan'i Tanora, fikambanana sivika iray miompana amin'ny fiarovana ny tanora, fa tsy mazava amin'ny tanjona kendreny ny lalàna:
(…) Mbola tsy mazava tsara hatramin'izao ny tokony omena lanja amin'ny heverina ho “FAMELEZANA NY FIAROVAM-PIRENENA, NY FAHAMENDREHANA NA TSIAMBARATELOM-PIAINAN'OLOMBELONA”.
Vao avy nametraka andiam-pitaovana [mg] ampiasaina ho amin'ny “filaminana” tahaka ny fametrahana fakantsary fanaraha-maso [mg] tamin'ny araben'i Maputo, izay tsy mazava tsara amin'ny olom-pirenena ny antony sy ny tanjony ny governemantan'i Mozambika. Ny mody nolazaina moa dia hoe “fiarovam-panjakana sy ny olom-pirenena rahateo.”